ပေ့ါဘာကို ချေါယူဖို့ကွိုးပမျးနတေဲ့အပျေါ PSG ပရိသတျတှေ အကွီးအကယျြကနျ့ကှကျဆန်ဒပွခဲ့ – the One Sports Journal
ပွငျသဈထိပျသီးကလပျ PSG အသငျးဟာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျကှငျးလယျလူပေ့ါဘာကို ချေါယူဖို့ကွိုးပမျးနပေမေယျ့ အသငျးပရိသတျတှကေတော့ အဲဒီကွိုးပမျးမှုအပျေါ အကွီးအကယျြကနျ့ကှကျတဲ့သဘောမြိုးနဲ့ အသငျးလကေ့ငျြးရေးကှငျးပွငျပမှာ ငှကျပြောသီးတှခြေိတျပွီး လူမြိုးရေးခှဲခွားခဲ့သလို စာတနျးခြိတျဆှဲပွီးတော့ ဆန်ဒပွခဲ့ပါတယျ။
အခုစနနေမေ့နကျပိုငျးက PSG အသငျးရဲ့လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးအနီးမှာ PSG ပရိသတျတှကေ စာတနျးတဈခုခြိတျဆှဲခဲ့ပွီး အဲဒီပျေါမှာ “ပေါ့ဘာရေ ..မငျးအမပွေောတဲ့အတိုငျး နားထောငျလိုကျတာကောငျးမယျထငျတယျ… မငျးအမကေလညျး ဒီအသငျးမှာ မကစားစခေငျြသလို. ငါတို့ကလညျး မငျးကို မလာစခေငျြဘူး”လို့ ရေးသားခဲ့တာပါ။
အဲဒီစာတနျးကို ဘယျသူခြိတျသှားလဲဆိုတာ မသိရသေးသလို PSG ပရိသတျတှအေနနေဲ့ ဘာဖွဈလို့ ပေ့ါဘာကို အသငျးဆီမပွောငျးရှစေ့ခေငျြတာလညျးဆိုတာကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မသိရသေးပါဘူး။ ဖွဈနိုငျတာက ပေ့ါဘာဟာ ၂၀၁၉ ခုနှဈခနျြပီယံလိဂျပှဲတုနျးက PSG အသငျးကို အနိုငျရခဲ့ခြိနျမှာ အလှနျအကြှံအောငျပှဲခံခဲ့လို့မြား PSG ပရိသတျတှကေ အခုလို ဆနျ့ကငျြနတောလားဆိုပွီး ဗွိတိနျသတငျးစာ Daily Mail က သုံးသပျခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့မှာ ဒီနှဈသငျးဆုံတှခေဲ့တုနျးက ဒုတိယအကြော့ပှဲမှာ ပေါ့ဘာဟာ ပှဲပယျပွဈဒဏျကွောငျ့ မပါဝငျနိုငျခဲ့ဘဲ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပွငျသဈမွမှော PSG အသငျးကို (၃-၁)ဂိုးနဲ့အနိုငျယူခဲ့လို့ ပေ့ါဘာက ပှဲအပွီး အသငျးဖျောတှနေဲ့အတူ အကွီးအကယျြအောငျပှဲခံခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပေ့ါဘာဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျး(၁)နှဈသာကနျြရှိတော့ပွီး ယူနိုကျတကျအသငျးက သူ့ကို လစာငှတေိုးမွှငျ့ပေးပွီးတော့ ပေါငျသနျး(၅၀)တနျကွေးရှိတဲ့ စာခြုပျသဈတဈရပျခြုပျဆိုဖို့ ကမျးလှမျးခဲ့ပမေယျ့ ငွငျးဆနျခဲ့တယျဆိုပွီးသတငျးထှကျနတောပါ။ အခုလောလောဆယျ PSG အသငျးက ပေ့ါဘာကို ချေါယူဖို့ခြိတျဆကျနပွေီး အေးဂငျြ့ဖွဈတဲ့ရိုငျအိုလာနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့တယျလို့ မီဒီယာတှကေ အကယျြတဝငျ့ဖျောပွနပေမေယျ့ အခုအခြိနျအထိတော့ နှဈဖကျအသငျးကွား တရားဝငျဆှေးနှေးတာမြိုးမရှိသေးပါဘူး။
ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ပေ့ါဘာကို ပွောငျးရှကွေ့ေးမရဘဲ အလှတျနဲ့မဆုံးရှုံးရဖို့အတှကျ အခုနှရောသီအတှငျး ရောငျးခဖြို့ရှိနပွေီး ပေါငျသနျး(၅၀)ဝနျးကငျြလောကျရရငျ လကျလှတျခံဖို့ရှိနပေါပွီ။
ပေ့ါဘာကို ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အပေါ် PSG ပရိသတ်တွေ အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့
ပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ် PSG အသင်းဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူပေ့ါဘာကို ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမယ့် အသင်းပရိသတ်တွေကတော့ အဲဒီကြိုးပမ်းမှုအပေါ် အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ အသင်းလေ့ကျင်းရေးကွင်းပြင်ပမှာ ငှက်ပျောသီးတွေချိတ်ပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားခဲ့သလို စာတန်းချိတ်ဆွဲပြီးတော့ ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။
အခုစနေနေ့မနက်ပိုင်းက PSG အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းအနီးမှာ PSG ပရိသတ်တွေက စာတန်းတစ်ခုချိတ်ဆွဲခဲ့ပြီး အဲဒီပေါ်မှာ “ပေါ့ဘာရေ ..မင်းအမေပြောတဲ့အတိုင်း နားထောင်လိုက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်… မင်းအမေကလည်း ဒီအသင်းမှာ မကစားစေချင်သလို. ငါတို့ကလည်း မင်းကို မလာစေချင်ဘူး”လို့ ရေးသားခဲ့တာပါ။ အဲဒီစာတန်းကို ဘယ်သူချိတ်သွားလဲဆိုတာ မသိရသေးသလို PSG ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ပေ့ါဘာကို အသင်းဆီမပြောင်းရွှေ့စေချင်တာလည်းဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာက ပေ့ါဘာဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲတုန်းက PSG အသင်းကို အနိုင်ရခဲ့ချိန်မှာ အလွန်အကျွံအောင်ပွဲခံခဲ့လို့များ PSG ပရိသတ်တွေက အခုလို ဆန့်ကျင်နေတာလားဆိုပြီး ဗြိတိန်သတင်းစာ Daily Mail က သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာ ဒီနှစ်သင်းဆုံတွေ့ခဲ့တုန်းက ဒုတိယအကျော့ပွဲမှာ ပေါ့ဘာဟာ ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကြောင့် မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘဲ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပြင်သစ်မြေမှာ PSG အသင်းကို (၃-၁)ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့လို့ ပေ့ါဘာက ပွဲအပြီး အသင်းဖော်တွေနဲ့အတူ အကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပေ့ါဘာဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း(၁)နှစ်သာကျန်ရှိတော့ပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းက သူ့ကို လစာငွေတိုးမြှင့်ပေးပြီးတော့ ပေါင်သန်း(၅၀)တန်ကြေးရှိတဲ့ စာချုပ်သစ်တစ်ရပ်ချုပ်ဆိုဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတာပါ။ အခုလောလောဆယ် PSG အသင်းက ပေ့ါဘာကို ခေါ်ယူဖို့ချိတ်ဆက်နေပြီး အေးဂျင့်ဖြစ်တဲ့ရိုင်အိုလာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ မီဒီယာတွေက အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြနေပေမယ့် အခုအချိန်အထိတော့ နှစ်ဖက်အသင်းကြား တရားဝင်ဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ပေ့ါဘာကို ပြောင်းရွှေ့ကြေးမရဘဲ အလွတ်နဲ့မဆုံးရှုံးရဖို့အတွက် အခုနွေရာသီအတွင်း ရောင်းချဖို့ရှိနေပြီး ပေါင်သန်း(၅၀)ဝန်းကျင်လောက်ရရင် လက်လွတ်ခံဖို့ရှိနေပါပြီ။